शेयर बजारमा छोटेलाल रौनियारको छलाङ ...... » aarthikplus
अध्यक्ष नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
नेपाली पूँजीबारको क्षेत्रमा छोटेलाल रौनियार चीर परिचित नाम हो । जीवनका साढे दशक उमेर व्यतित गरिसकेका उनी सफल लगानीकर्ताका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौंको मखनमा जन्मिएका उनी ५ दाजुभाईमध्येका कान्छा । पिता स्व.सिवनन्दन र माता स्व.मोतीदेवीको कोखबाट । त्यही कारण हो शिक्षकले उनको नाम छोटेलाल जुराइदिएका । नेपाली शेयर बजारको विकासमा भने उनको योगदान ठूलो छ । पितापूर्खाले गरिआएको पेशा थियो कपडाको व्यापार । सानैदेखि अलि उनी भिन्न सोच र स्वभावका रौनियारले परम्परागत कपडा पसललाई छोडेर गार्मेन्ट उद्योगमा होमिए । उत्पादनसँगै निर्याततर्फ लागे । तर जीवको गति सधै एउटै लयमा कहाँ बग्छ र ? त्यही गार्मेन्ट कारखाना बन्द भएपछि उनको जीवन यूर्टन भयो । अर्थात उनकै शव्दमा शुरु भयो जीवनको दोस्रो इनिङ्ग । १५ बर्षकै उमेरमा एसएलसी पार लगाए जुद्धोदयबाट दोश्रो श्रेणीमा । उनी म्यानेजम्यान्टको विद्यार्थी बन्न पुगे । पब्लिक युथ क्याम्पसबाट आइकम,शंकरदेवबाट बि कम पार लगाए । यहीबीचमा सरकारले चलायो गाउँ फर्क अभियान । जतिखेर उनी मास्टर्सका गर्दै थिए त्रिविविबाट । यहीबीचमा पीताजी रहनुभएन् । ३४ सालमा जब पिताजीले छाडेर जानुभयो । १३ दिने काज कर्म सकिएलगतै दिदीले केही रकम हातमा थमाइदिनुभयो । अब त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने ? व्यवस्थानपनका विद्यार्थी न परे । त्यो माथि सानैदेखि अरुलेभन्दा अलि पृथक केही काम गर्नुपर्दछ भन्ने स्वभावका । यही बानी र स्वभावले उनी पिताहरुको बीडो छोडेर फरक पेशा र व्यवसाय रोज्न पुगे । त्यो थियो गार्मेन्ट उद्योग । उनको लक्ष्य थिया देशविदेश घुम्नु र ज्ञान बटुल्नु । एकै ठाउँमा जमेर उनलाई कुवाको भ्यागुतो हुनु थिएन् ।
गार्मेन्ट उद्योगमा राम्रै जमिरहेका थिए छोटेलाल । उनले सम्झौता गरेनन् गुणस्तरमा । त्यही कारण उनको गार्मेन्टबाट उत्पादित कपडाहरुको अर्डर जापान,अमेरिकाजस्ता मुलुकहरुबाट आउन थाल्यो । ०३४ सालमा गार्मेन्ट पसल खोलेका उनले ४ बर्षको बीचमा फ्याक्टी खोले ।
जीवनको गति सलल बगिरहेको थियो । गार्मेन्ट उद्योगबाटै छोटेलालको पहिचान बदलिएको थियो । उनको कम्पनीमा झण्डै ५ सय हाराहारीमा मजदुरहरु कार्यरत थिए तिनताक ।
देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उनको गार्मेन्ट उद्योग पनि संकटमा पर्न थाल्यो । जुन समयमा माओवादी शसस्त्र विद्रोह छाडेर राजनीतिमा होमियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन जितेर आएसँगै माओवादीका अनेक युनियनहरु खुल्न थाले । प्रचण्ड र वैद्यको खेमाहरु खुले उनको फ्याक्ट्रीमा पनि । त्यही दुई युनियनबीच लफडा निस्कन थाल्यो । कर्मचारीहरु नै आपसमा झगडा गर्न थालेपछि अर्डर आएको ठाउँमा समयमा सामान पुग्न सकेन् । गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्दा गर्दाै देश विदेशमा माग हुँदाहुँदै पनि उनको उद्योगमा कहिले माओवादी निकट कर्मचारीहरुको तालावन्दी,कहिले कर्मचारीहरुकै कुटाकुटका कारण विस्तारै उनको उद्योग धरायसी हुन थाल्यो ।
र उद्योग बन्द भएको झण्डै १४ बर्ष व्यतित भइसकेको छ ।
छोटेलालको दोश्रो इनिङ
कल्पना गरौं एउटा करोडौं लगानीमा सञ्चालित,झण्डै ५ सय श्रमिक कार्यरत उद्योगमा ताला ठोक्नु पर्दा छोटेलालको हालत कस्तो भयो होला ?
सम्हालिन कति कठिन भयो होला उनलाई ? तपाई हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं ।
देशको राजनीतिक परिस्थितीले एउटा उचाईबाट झरेर सडकमा पु्गेका पात्र हुन छोटेलाल । छोरी लण्डनमा थिईन् । केही समय मन भुलाउन उनी पत्नीसहित लण्डन पुगे । उनी २ महिना त्यता व्यतित गरेर स्वदेश फर्किए ।
गर्ने के ? जाने कहाँ ? केही फुरिरहेको थिएन दिमागमा । हरेक बिहान मर्निङ वाकमा । त्यहाँ भेटिन्थे उनीसँगै गार्मेन्ट उद्योगका सहयात्री । ती शेयर बजारमा प्रवेश गरिसकेका । जतिखेर गार्मेन्ट उद्योग चलिरहेको थियो त्यही समयमा केही कम्पनीका शेयर खरिद गरेका थिए उनले । शेयरको भ्यालु राम्रै भइरहेको थियो । र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए त्यतिबेला । उनले अहिलेका अर्थमन्त्रीको झैं उनको पनि शेयर बजारप्रति नकरात्मक दृष्टिकोण थियो । एक पटक शेयर बजारलाई जुवाको घरको संज्ञा थिए ।
नेताहरुको शेयरबजारप्रतिको दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिले शेयर बजारमा कसरी उलटपुलट आउँछ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । त्यतिबेला ११७५ को बिन्दुमा पुगेको शेयर ३५० को बिन्दुसम्म पुग्यो झरेर ।
यस्तो समयमा शेयर बजारमा छिरेका थिए उनी । शेयर बजारको बारेमा अर्थशास्त्रको पुस्तकहरुमा त पढेका थिए तर कसरी सेकेण्डरी मार्केटमा शेयर कसरी खरिद गर्ने जानकारी थिएन । केही साथीहरुका सहयोगमा शेयर खरिद त गरे । तर शेयर बजार झन झन ओरालो लाग्दै गयो ।
उनले शेयर बजारमा प्रवेश गर्दा २५० कित्ता शेयर खरिद गरे सिद्धार्थ बैंकको ।
करिब आठ महिना लण्डनको बसाई सकेर उनको जीवन संगीनि स्वदेश फर्कदा उनी लाखौं लगानी सहित शेयर बजारमा छिरिसकेका थिए । र उनको लगानी गरेको शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै थियो । २८ बर्षसम्म गार्मेन्ट उद्योगमा साथ दिएकी श्रीमतीसँग सल्लाह गरे ।
जसरी मलाई हिजो गार्मेन्ट उद्योगीका रुपमा देशदेखि विदेशकाले चिन्थे त्यसैगरी शेयर बजारमा म पनि चिनिन चाहन्छु । मलाई तिम्रो साथको खाँचो छ ।
त्यसैले त भन्छन नि एउटा पुरुषको सफलताको पछि महिलाको हात हुन्छ भनेर । तर शेयर बजारमा क्रियटिभ काम केही हुन्नथ्यो गार्मेन्ट उद्योगमा जस्तो । शेयर बजारमा दिमाग लगायो,शेयर किन्यो,बेच्यो ।
शेयर बजारमा लागेको यो दश बर्षको समयमा छोटेलालको पहिचान बदलियो । उनी जहाँ काम गर्छन त्यहाँ दिल दिमाग दुबै लगाएर काम गर्छन् । त्यही कारण त एउटा उचाईबाट खसेर भुँईमा पुगेका उनको पहिचान फेरि त्यहाँबाट अठेर अहिले अर्काे उचाईमा पुगेका छ । शेयर बजारको क्षेत्रमा शुन्यबाट प्रवेश गरेका उनी यो अवधिमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । र शेयर बजारबाटै उनको जीवन अहिले कायापलट पनि भएको छ ।
उनी शेयर खरिद गर्दा बलियो कम्पनी हेर्न लगानीकर्ताहरुलाई सल्लाह दिन्छन् । त्यही कम्पनीको कमाई बलियो हुने भएकोले लगानीकर्ताहरुलाई डिभिडेन्ट,बोनस बढी दिने भएकाले त्यस्तो कम्पनी हेर्न सुझाउँछन् । नेटवर्थ बढी भएको, खराब सम्पत्ति कम रहेको कम्पनीमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाउ छ । विशेष गरेर लगानीका क्षेत्र बैंक,वित्त,जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी,राम्रा हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दा उचित हुने उनको सुझाव छ । तर लगानीपूर्व ती कम्पनीको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न पर्ने उनी सल्लाह दिन्छन् ।